IGranaio- Inqaba yakudala emangalisayo enedama elishushu - I-Airbnb
IGranaio- Inqaba yakudala emangalisayo enedama elishushu
Inqaba sinombuki zindwendwe onguAlessandro&Anna
Elinye lamagumbi ali-10 enqabeni, kumgangatho ophantsi, onikwe ifanitshala yakudala kunye neyokudala kunye neprints, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlala elikhulu kunye nekhitshi kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini-igumbi lokuhlambela elinebhafu yeediliya kunye neshawari, umoya womoya. Abantu aba-2, ilinen yebhedi kunye neetawuli zibandakanyiwe kwixabiso. Idama elishushu neligqunyiweyo livula unyaka wonke!
Ibekwe kwindlu entle kakhulu yenkulungwane ye-19, iCastello di Lispida yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kunye nokuphumla. Amagumbi afakwe ngokungcamla akumgangatho oncomekayo weklasikhi okanye uyilo lwelizwe le-chic eza neentlobo ngeentlobo zobumnandi bale mihla, kubandakanya iibhayisekile kunye neWi-Fi yasimahla. Yonwabela imvakwemini ehlaziyayo kwichibi eligqunyiweyo eligqwesileyo kunye neetabhu ezishushu zangaphandle (ezivulwa unyaka wonke), kunye newayini zendalo eziyolisayo kwibha yewayini (iwayini incasa xa iceliwe).
Ifama yaseLispida igubungela ngaphezulu kweehektare ezingama-90, kwaye inechibi elishushu elinemithombo eshushu elivelisa udaka oluluncedo kunyango kunye neempawu zalo zokuphumla. Kude kufuphi nenqaba kukho amaziko amaninzi ashushu apho unokubhukisha lonke uhlobo lokuthanjiswa kunye nonyango lodaka oludumileyo lwehlabathi.
4.90 · Izimvo eziyi-169
Inqaba ilele embindini we-Euganean Hills Natural Park, kwindawo ekhuselweyo yemihlaba emihle nenoxolo, indawo nje elungileyo yabantu abathanda ukuhamba kwindalo kwaye bazulazule ngeebhayisekile zeentaba, ezifumaneka simahla. IiNdwendwe zethu.
Kufuphi neNqaba uya kufumana iikhosi zegalufa ezi-4 ezintle nezifuna ngamandla (iikhosi ezibini ezinemingxuma eyi-18 kwi-72, ikhosi enye 27 imingxuma ku-72 + par 36 kunye nemingxuma eyi-9).
Ukuba ungumthandi wezobugcisa, iNqaba yaseMonselice, idolophana ephakathi kwe-Arquà Petrarca, izixeko zasePadova naseVenice kunye nezinye iindawo ezininzi ziya kukunika amathuba anomdla enkcubeko kunye nemisebenzi eyaziwayo yehlabathi yobugcisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Alessandro&Anna
Izimvo eziyi-1 169
Kwiveki ephambi kokufika kwakho, siya kuqhagamshelana nawe ngomyalezo ukufumana ulwazi malunga nohambo lwakho kunye nexesha lokufika eliqikelelweyo. Siya kukuvuyela ukwanelisa zonke izicelo zakho kunye nokukwamkela eCastello di Lispida. Indlu yenzelwe wena kuphela, ngelixa ichibi lokuqubha kunye neetabhu ezishushu kwabelwana ngazo nezinye iiNdwendwe. Asisoloko sikhona, kodwa sifikeleleka ngalo lonke ixesha. Kwaye iqela lethu liya kwenza konke okusemandleni alo ukwenza uzive usekhaya!
Kwiveki ephambi kokufika kwakho, siya kuqhagamshelana nawe ngomyalezo ukufumana ulwazi malunga nohambo lwakho kunye nexesha lokufika eliqikelelweyo. Siya kukuvuyela ukwanelisa zonk…
Iilwimi: English, Deutsch, Italiano, Русский